APOKALYPSY 20.1-15 F. 6 | Fitandremana Ankadifotsy
APOKALYPSY 20.1-15 F. 6
IZAY HITRANGA AMIN’NY FARANY
Arivo taona (1-6) Betsaka ny mametram-panontaniana hoe rahoviana io no hitranga ? Ny zava-dehibe dia ny mino fa hisy io vanim-potoana io satria faminaniana mbola ho avy io. Amin’izay fotoana izay dia hiverina tahaka ny tao saha Edena, talohan’ny fahalavoana, ny fiainan’ny zanak’olombelona. Ho foana ny asan’ilay ratsy satria ho gadraina arivo taona Satana (1-3). Hiara-manjaka sy hitsara amin’i Jesoa Kristy ny mino efa maty ka nitsangana tamin’ny maty (5), miaraka amin’ireo mino mbola velona (6). Hotorian’ireo ny filazantsara maneran-tany satria mpisoron’Andriamanitra izy ireo (1Petera 2.9).
Ny fiafaran’i Satana (7-10) Tapitra ny arivo taona, hovahana indray izy (7). Fa ahoana ? Tsy tena mazava ny antony. Mbola hamitaka ny olona indray izy ka hitaona azy ireo hiady amin’ny olona masina ary te handrava an’i Jerosalema. Ho resy amin’izany ady lehibe izany anefa izy ireo (8-9). Satana kosa hatsipy any amin’ny farihy afo miaraka amin’ny bibidia sy ny mpaminany sandoka (10), ampijaliana mandrakizay. Ho sanatria aminao anie ny hanao fanekena (pacte) amin’i Satana hahazoana harena, voninahitra, toerana ambony… satria loza ny vokatr’izany !
Fitsarana farany (11-15) Hiatrika ny fitsaran’Andriamanitra ny olona rehetra izay nandalo tety an-tany (11-12). Hotsaraina arakarak’izay voarakitra an-tsoratra ny amin’ny asa nataony ny maty tsirairay (12). Ny olom-boavonjy hahazo valisoa amin’ny asa tsara nataony fahavelony amin’ny fampandrosoana ny fanjakan’Andriamanitra (13). Ny olom-bery izay tsy hita voasoratra ao amin’ny bokin’ny fiainana dia atsipy any amin’ny farihy mirehitra afo sy solifara miaraka amin’ny devoly sy ny forongony ampijaliana mandrakizay (10).
Fanontaniana : Aiza no andanianao ny mandrakizainao?